Twitter ichawedzera zvitambi mumavhiki anotevera | IPhone nhau
Mune kumwe kufambisa ne edza kukurudzira kushandiswa kweiyo microblogging chikuva, iyo kambani yeTwitter ichangobva kuzivisa kuuya mumazuva mashoma anotevera ezvinamato kuti ikwanise kunyatsoita mifananidzo yese yatinoburitsa pasocial network. Mazuva ese mamirioni ema tweets ane pikicha anotumirwa, kunyanya munguva idzodzo apo isu tinoda kuratidza kana kuratidza chinangwa chemufananidzo kana nzvimbo yatiri.
Sezvo isu tichigona kuverenga pane iyo Twitter blog, munguva pfupi, isu tichakwanisa svitsa mifananidzo yedu nezvimiti zvakasarudzika. Izvo isu zvatisingazive ndezvekuti kana kambani ichida kuwana kudzoka kwehupfumi, ichipa mapakeji kuburikidza nekutenga kwakabatana kana kana ichatipa izvi zvekunamatira mahara, zvingangoita.
Nguva dzese dzatinenge tichida kugadzira pikicha ine zvitambi uye zvigadzirwa zvekushongedza kuti tiite kuti mifananidzo yedu inakidze, isu tichakwanisa shandisa zvisizvo zvakawanda mumufananidzo mumwe chete, pamusoro pekuvatenderedza, vachichinja chinzvimbo chavo uye saizi ... sekugona kwatingaita chero imwe application yatiri kutendera kuti tiwedzere zvitambi kumifananidzo.
Kana isu tikabaya pikicha ine zvimwe zvinamato, isu tinokwanisa kuwana mhando ye hashtag yakagadzirwa neicho chinamirwa uye kukwanisa kuona mifananidzo yese izvo vashandisi vakatumira pane microblogging chikuva vachishandisa iyo imwechete chitambi.
Parizvino hatizive kuti basa idzva iri richavhurwa riini. ichauya iri fomu yekuvandudza yeese maApple neApple, hapana kutaura chero nguva nezve Windows Phone chikuva, asi zvinofungidzirwa kuti iwe uchagamuchirawo, kunyangwe zvisiri panguva imwe chete.
Inguva yakareba zvakadii iyo Facebook ichatora kutevedzera iyi sarudzo? Kwenguva yakati zvino, chinhu chega pasocial network chavakagadzira mukushandisa kwayo kutevedzera zvese zviri kuwedzerwa nemakwikwi. Teregiramu ne Twitter zvave chinhu chakakura kwazvo chekurudziro kunaMarc Zuckerberg, asi aigona kuyedza kuzvivhara zvishoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » App store » Twitter ichawedzera zvitambi mumavhiki anotevera
Google inogona kuvhura yayo smartphone gare gare gore rino